दाउन्ने देवीले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस् चैत्र २९ गते शनिबारको राशिफल - नमुना पोष्ट
दाउन्ने देवीले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस् चैत्र २९ गते शनिबारको राशिफल
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार (१ साल अघि)
बि.सं.२०७६ चैत २९,शनिवार, इ.सं.२०२० अप्रिल -११ ,शक संवत-१९४२,नेपाल संवत-११४० चौलागा,प्रमादी संवत्सर,उत्तरायण,ऋतु-वसन्त,वैशाख कृष्णपक्ष तिथि-चतुर्थी , २४:२२ बजे उप्रान्त पञ्चमी,नक्षत्र-अनुराधा , २५:२० बजे उप्रान्त ज्येष्ठा,योग-सिद्धि ६:५२ बजेदेखि व्यतीपात, २८:२१ बजे उप्रान्त परिघ,करण-वव १३:१३ बजेदेखि वालव , २४:२२ बजे उप्रान्त गर,चन्द्रराशि-वृश्चिक,आनन्दादी योग-अमृत,सूर्योदय-५:४५,सूर्यास्त-१८:२६,दिनमान ३१ घडी ४२ पला l
धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । भाग्यले साथ दिनेहुँदा सानो प्रयत्नले कामहरु बन्नेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा तपाईकै बर्चस्व रहनेछ। व्यापार व्यावसायमा घाटा लाग्नेछ । भिडभाडको यात्रा नगर्नुहोला । स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला ।